PSG Oo Ku Dagaalameysa Romelo Lukaku.
Manchester United oo loo gacan galiyay Heshiis ay kula wareegi karto Pau Torres
Pierre-Emerick Aubameyang oo seegi doona kulanka Sheffield United
Liverpool oo indhaha la raaceysa qadka dhexe ee kooxda barcelona Pedri.
Home Horyaalka France PSG oo ku dagaalameysa Romelo Lukaku.
PSG ayaa indhaha ku haysa xidiga wadanka Belgium iyo kooxda inter milan Romelo Lukaku kaas oo ku raaxeysanaya horyaalka seria A Talyaaniga xilli uu inter milan ka dhigay koox u tartameysa horyaalka talyaaniga xagaagaan.
Kooxda heysata horyaalka Faransiiska PSG ayaa xiiseyneysa xiddigga Inter Paris Saint-Germain ayaana isha ku heysa weeraryahanka ku xiijiso Safkeeda si marka neymar ama mbappe midkood haduu baxo loogu xoojiyo kooxda faransiiska sida laga soo xigtay Calcio Mercato.
Milkiilayaasha cusub ee Nerazzurri ayaa laga yaabaa inay u muuqdaan inay iibinayaan ciyaaryahanka heerka caalami ee Belgium kaasoo haatan ah kooxda ugu mushaharka badan, iyadoo ay jirto dhaqaale la’aanta cudurka faafa ee coronavirus.
PSG ayaa diyaar u ah inay ku dagaalaam Lukaku laakiin Manchester City ayaa sidoo kale lala xiriiriyay wallow kooxdiisi hore dhankeeda ay dooneyso.
Previous articleGuardiola: Waa wax lagu farxo in la haysto Foden
Next articleAtletico madrid oo kaga cad cad barcelona iyo Real madrid ku guuleysiga La Liga.
Zinedine Zidane oo ka Hadlay guusha Barcelona laga gaaray iyo Cadaadiska...
Manchester United oo loo gacan galiyay Heshiis ay kula wareegi karto...
Wararka Ciyaaraha Maanta2524
Suuqa kala iibsiga1027